Antenimierampirenena :: Anio ny ny fandaniana na tsia an’ireo lalàna roa • AoRaha
Antenimierampirenena Anio ny ny fandaniana na tsia an’ireo lalàna roa
Tsy niandry ela. Lany, omaly, ny fandaharam-potoanan’ireo depiote eny amin’ny Antenimieram- pirenena mandritra ny enina andro, eny Tsimbazaza. Tapaka fa anio no hanatanterahana ny fivoriana azon’ny besinimaro hatrehana handinihana sy hankatoavana na tsia an’ireo vola- volan-dalàna miisa roa naroson’ny governemanta.
Isan’izany ny volavolan- dalàna manome fahefana ny Filoham-pirenena hisolo toerana ny Antenimieram- pirenena eo amin’ny famoahana lalàna ao anatin’ny fe-potoana voafetra. Eo ihany koa ny volavolan-dalàna fanitsiana an’ireo andininy sasany ao amin’ny lalàm-pifidianana mifehy ny fifidianana amin’ny ankapobeny sy ny an’ny solombavambahoaka. Amin’ny alalan’ny tsangan-tanana no hirosoana amin’ny fandaniana na tsia an’ireo volavolan-dalàna ireo.
Voafaritra ao anatin’ity fandaharam-potoana ity ihany koa fa ny alatsinainy izao no hampahafantaran’ny
governemanta ny fandaharanasa ankapoben’izy ireo mandritra an’ity enim-bolana voalohany hiasan’izy ireo ity. Ny talata kosa no hifarana amin’ny fomba ôfisialy ny fivoriana tsy ara-potoana farany hataon’ireo depiote eny Tsimbazaza.
Fanalam-baraka sy tsaho :: Nametraka fitoriana ity lehilahy nolazaina ho nanolana ny zanany
Volavolana tetiandon’ny CENI :: Hotontosaina ny 27 mey 2019 ny fifidianana depiote